=လူထုကျန်းမာရေး(ပျားသံပုရာရည်ကနေရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ)=
ပျားသံပုရာရည်ဟာ ဇီဝတွင်းဖြစ်စဉ်ကို အားကောင်းစေပြီး အစာချေဖျက်မှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေ ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုလည်းတိုးမြှင့်ပေးတဲ့အပြင်ဆီးလမ်းကြောင်းကိုလည်း
သန့်ရှင်းစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အာဟာရစုပ်ယူနိုင်မှုကိုတိုးတက်စေပြီး
pH ပမာဏကိုထိန်းညှိပေးကာ အသားအရေကို ကြည်လင် သန့်စင်စေပါတယ်။
အနာကျက်လည်းမြန်စေသလို ကိုယ်အလေးချိန်လည်းကျစေနိုင်ပါတယ်။ သံပုရာဟာ
ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာနုပျိုစေဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ အာဟာရဓာတ်နဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်
သံပုရာရည်ကို ရေခပ်နွေးနွေး၊ ပျားရည်တို့နဲ့ ရောစပ်လိုက်တဲ့အခါ သံပုရာသီးမှာ
**ပျားသံပုရာရည်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ**
– သံပုရာရည်ဟာ သွေးကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေတယ်လို့သိကြထားကြပါတယ်။
သံပုရာရည်က အစွမ်းထက် သန့်စင်ပစ္စည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
– ပျားသံပုရာရည်က ဘက်တီးရီးယားတွေကိုဆန့်ကျင်မှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး
အရေပြားထဲက ကော်လာဂျင်တစ်သျှူးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို
– ဗီတာမင် စီနဲ့ သံပုရာသီးနဲ့ပျားရည်မှာပါဝင်တဲ့ အခြားဒြပ်ပေါင်းတွေက အရေပြားပေါ်ကအရေးအကြောင်းတွေနဲ့ အမဲကွက်တွေကို လျှော့ ကျသက်သာစေပြီး
free radical တွေပျက်စီးမှုကိုတိုက်ဖျက်ရာမှာလည်းအထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
– ဗီတာမင် စီမှာပါဝင်တဲ့ သဘာဝ အယ်ကာလိုင်းဓာတ်က ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကိုသေစေနိုင်တာ ကြောင့် ကျန်းမာတောက်ပတဲ့အသားအရေ
ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ဗီတာမင် စီကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။
– သံပုရာရည်ဟာသွေးတွင်းကအဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တာကြောင့် အရေပြားကိုအတွင်းပိုင်းကနေ အပြင်ပိုင်းအထိ အပြစ်အနာအဆာကင်းစေပါတယ်။
– တစ်ခါတစ်လေမှာ သံပုရာရည်ကို ဝက်ခြံနဲ့အခြားအရေပြားကူးစက်မှုတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ သံပုရာရည်ကို ရိုးရိုးတန်းတန်းအသုံးပြုရုံနဲ့ ဝက်ခြံနဲ့အခြားအရေပြားကူးစက်မှုတွေကို ကာကွယ်ရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီး
ကျန်းမာကောင်းမွန်တဲ့အသားအရေကိုထိန်းသိမ်းရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။
၂. ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်အထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်း။
သံပုရာသီးမှာ ပက်တင်အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းတာကြောင့် အစားစားချင်စိတ်ကို လျှော့ ကျအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ပျားသံပုရာရည်က
အစာအိမ်ထဲမှာ အယ်လ်ကာလိုင်းဓာတ်တွေကိုပိုမို ဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့်
ကိုယ်အလေးချိန်ကိုမြန်မြန်လျှော့ ကျအောင်အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ပိုမိုစားသုံးသူတွေက ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျဆင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
၃. ဇီဝတွင်းဖြစ်စဉ်ကို အားကောင်းစေခြင်း။
သံပုရာသီးဟာ ဆစ်ထရစ် အက်ဆစ်ကြွယ်ဝတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး
ဆစ်ထရိတ်ဓာတ် ဟာ ဆစ်ထရစ် အက်ဆစ်လည်ပတ်မှုမှာမှာပါဝင်တဲ့ အရေးပါတဲ့ ကြားခံပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သည်လည်ပတ်မှုဟာ ဇီဝတွင်း ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုအားလုံးနီးပါးအတွက်အရေးပါတဲ့ ဓာတုဓာတ်ပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်
တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါ တယ်။ သည်လည်ပတ်မှုဟာ အစားအစာတွေကနေရရှိတဲ့
အစာချေဖက်မှုကို တမုဟုတ်ချင်း တိုးတက်စေပါ တယ်။ သည်ဖျော်ရည်မှာပါဝင်တဲ့
အက်တမ်ဖွဲ့စည်းမှုက လူ့တံတွေးနဲပဆင်တူပြီး အစာချေဖျက်မှုကို
အထောက်အကူပြုပါတယ်။ သည်ဖျော်ရည်က အသည်းကို အစာချေဖျက်ရာမှာ
လိုအပ်တဲ့ အက်ဆစ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ သည်းခြေရည်ကိုထုတ်လုပ်အောင်
လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ သံပုရာရည်မှာပါဝင်တဲ့ အစာချေဖက်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေက
ရင်ပူတာ၊လေပွတာနဲ့ ရင်ပြည့်ရင်ကယ်တာလိုမျိုး အစာမကြေတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ပျားသံပုရာရည်က အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ အူတွန့်တွေကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ဆောင် ပေးခြင်းဖြင့် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းကိုသန့်ရှင်းရေးမှာအထောက်အကူပေးပါတယ်။
ပျားသံပုရာရည်က အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းထဲမှာ အညစ်အကြေးတွေစုပုံမနေအောင်ဖယ်ရှားမှုမှာအထောက်အကူပေးသလို
အူလမ်းကြောင်းထဲမှာ မကျေညက်တဲ့အစားအစာအကြွင်းအကျန်တွေ
စုပုံမနေအောင်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးပါ တယ်။
– သံပုရာသီးမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် စီမှာ ယောင်ရမ်းမှုကိုသက်သာစေတဲ့
အကျိုးကျေးဇူးတွေပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါ တယ်။ သံပုရာသီးမှာပါဝင်တဲ့ဗီတာမင် စီကို ပန်းနာရင်ကြပ်နဲ့အခြား အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုကြပါတယ်။
– သံပုရာသီးမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် စီ အအေးမိတာကိုလည်းတိုက်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
– သံပုရာသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ ပိုမွှားတွေကိုတိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ saponin ကအအေးမိတာနဲ့တုပ်ကွေးမိတာ တွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
-သံပုရာသီးမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် စီက ကိုယ်ခံအားစနစ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအဓိကအရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတဲ့ သံဓာတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်က စုပ်ယူနိုင်စွမ်းတိုးတက်စေပါတယ်။
– သံပုရာသီးမှာ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုံဆော်ပေးပြီး သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏကြွယ်ဝစွာပါရှိပါတယ်။
– သံပုရာသီးမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ free radical တွေကို ကာကွယ်စီမံတဲ့တာဝန်ကို
ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ flavonoids ပမာဏကြွယ်ဝစွာပါရှိပါတယ်။
ပျားသံပုရာရည်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကနေဆီးစွန့်ထုတ်မှုပမာဏကိုတိုးစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက်
မလိုအပ်တဲ့ အရာ တွေကိုစွန့်ထုတ်အောင်အကူအညီပေးပါတယ်။ အဆိပ်အတောက်တွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ လျင်လျင်မြန်မြန် ထွက်ရှိသွားမှုက ဆီးလမ်းကြောင်းကျန်းမာစေပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို ဆီးလမ်းကြောင်းကတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါ (UTI) ကိုခ့စားနေရသူအမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ သည်ပျားသံပုရာဖျော်ရည်ဟာ
၈. pH ပမာဏကိုထိန်းညှိပေးခြင်း။
သံပုရာသီးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အယ်ကာလိုင်းဓာတ်အများဆုံး
ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ အစားအစာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သံပုရာသီးမှာ ပင်ကိုယ်သဘာဝကိုက အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲ မှာလည်း ဇီဝတွင်းဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါ အချဉ်မပေါက်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ citric အက်ဆစ်ရှိပါတယ်။ သံပုရာသီးမှာ အက်ဆစ်ပျော့တွေဖြစ်တဲ့ citric အက်ဆစ်ရော ascorbic အက်ဆစ်ပါပါဝင် ပါတယ်။ သည်အက်ဆစ်တွေက သွေးထဲမှာရှိနေတဲ့ pH အဆင့်ထက်များနေတဲ့
သတ္တုဓာတ်တွေကို လောင်မြိုက် ပျက်စီးအောင်လုပ်ဆောင်မှုမှာအထောက်အကူပြု
ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ pH ပမာဏဟာ အက်ဆစ်အနေအထား ကိုရောက်ရှိသွားချိန်မှာ ရောဂါတွေကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ ပျားသံပုရာရည်မှန်မှန်သောက်သုံးပေးတာက
ဂေါက်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အခြေခံအကြောင်းအရင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့
နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဆစ်တွေကြားထဲက ယူရစ်အက်ဆစ်တွေ
အပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အက်ဆစ်ဓာတ်အားလုံးကို ဖယ်ထုတ်ရာမှာ
၉. အနာကျက်မြန်စေခြင်း။
သံပုရာသီးမှာ အများအပြားပါဝင်နေတဲ့ ascorbic အက်ဆစ်က
အနာကျက်မြန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ သည်အက်ဆစ်ဟာ အရိုး၊တွယ်ဆက်
တစ်သျှူးနဲ့ အရိုးနုတွေ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှု
၁၀. ခံတွင်းနံ့သင်းပျံ့စေခြင်း သံပုရာသီးဟာ ခံတွင်းနံ့လန်းဆန်းစေတဲ့အပြင် သွာကိုက်သွားနာတာတွေနဲ့သွားဖုံးနာတာတွေကိုလည်းသက်သာ စေပါတယ်။ သတိပြုရမယ့်အချက်တစ်ချက်က citric အက်ဆစ်ဟာသွားရဲ့အပေါ်ယံကြွေလွှာတွေ
ကို ပျက်စီးစေ နိုင်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သံပုရာရည်သောက်သောက်ပြီးချင်း
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေဓာတ်လျှော့ နည်းလာတဲ့အခါ ပင်းပန်းနွမ်းနယ်တာ
၊နှေးကွေးလေးကန်တာ၊ ကိုယ်ခံအားစနစ် လုပ်ဆောင်မှုတွေကျဆင်းတာ၊ဝမ်းချုပ်တာ၊အားအင်ကုန်ခမ်းတာ၊သွေပေါင်ချိန်ကျတာ၊သွေးပေါင်ချိန်
တက်တာ၊ အိပ်ရေးပျက်တာ၊ စိတ်မကြည်တာ၊စိတ်ဖိစီးမှုများတာတွေကို
ရေနွေးကြက်သီးနွေးဖန်ခွက်ရှည်တစ်ခွက်ထဲကို သံပုရာသီးတစ်ခြမ်းညှစ်ထည့်ပြီး ပျားရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ရောစပ်ကာ နှံ့စပ်အောင်မွှေပြီး ခပ်မြန်မြန်သောက်သုံးပေးပါ။ ပျားသံပုရာရည်သောက်ပြီး တစ်နာရီအတွင်း ကော်ဖီတွေ၊ လက်ဖက်ရည်တွေ
မသောက်မိဖို့သတိထားပါ။ ပျားသံပုရာရည်သောက်ပြီးတဲ့အခါ သွားကြွေလွှာ တွေအပေါ် အက်ဆစ်ဓာတ်သက်ရောက်မှုနည်းအောင် ရေနဲ့ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။
ပျားသံပုရာရည် သွားကိုမထိ အောင် အအေးသောက်တဲ့ပိုက်နဲ့လည်းသောက်သုံးလို့ရပါတယ်။
အစာမရှိဘဲ ပျားသပုရာရည်သောက်သုံးတာကြောင့် အော့အန်ချင်သလိုဖြစ်ပါက
[Ref: Curejoy; 17 February, 2017]